DAAWO: Dawladdaha Somalia iyo Turkiga oo galay heshiis cusub iyo Muhiimada Soomaalida ugu Jirta | KALSHAALE
DAAWO: Dawladdaha Somalia iyo Turkiga oo galay heshiis cusub iyo Muhiimada Soomaalida ugu Jirta
Feb 10, 2019 - 1 Aragtiyood
Ankara ( Kalshaale ) Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Mudane Siciid Xuseen Ciid ayaa dalka Turkiga gaar ahaan Magaalada Izmir kulan kula yeeshay Wasiirka Beeraha iyo Cuntada dalkaasi Mudane Bekir Pakdemirli, waxeyna ka wada hadleen arrimo badan oo quseeya labada wasaaradood.
Kulanka oo yimid kadib marti qaad uu Wasiirka Beeraha iyo Cuntada dalka Turkiga u fidiyey Wasiirka Beeraha Soomaaliya Mudane Siciid Xuseen Ciid ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada wax soosaarka beeraha, iyo dardar galinta heshiisyo iskaashi oo ay labada Wasaaradood horey u galeen.
Wasiir Ciid ayaa dhigiisa dalka Turkiga ka dalbaday in si dhaqso ah loo hirgeliyo mashruuca biyo xireenka magaladda Jowhar iyo dib u dhiska kaabayaasha beeraha oo ay labada dowladood horey ugu heshiiyeyn iyadoo arintaasna uu aqbalay wasiirka beeraha ee dalka Turkiga oo ballan qaaday in qorshahaasi si dhaqso ah loo fulin doono.
Ugu dambeyn labada Wasiir ayaa kawada qaybgalay bandhigga Beeraha caalamiga ah ee 14-aad oo lagu qabtay magaalada Izmir, iyadoo ay kasoo qaybgaleen in kabadan Toban wasiir oo ka kala socday dalal kala duwan , wakiilo ka socday ururada caalamiga ah iyo wufuud heer sare ah oo madasha lagu casumay.
Adeer horaan idiinku sheegay in jam somland ay ahayd motorka wixii soomaaliya la isku odhan jiray ? Hadana u fiirsada wasirka beeraha jam somland oo martiqaad ka helay turkiga ayaa qaar xamar joogaa hinaase la tageen izmir waddo markay samaysanayso jam somland way samaystaan wiiganna ciyaaro ayey marti gelisay jam somland waad maqlayseen xamar eretariya ayey isku qaadeen inay keenaan xamar kkk adeer naga varta maamulka iyo dawladnimada